के नेकपा फुटको फाइदा बिप्लव समुहले लिन सक्छ ? – हाम्रो रिपोर्ट
के नेकपा फुटको फाइदा बिप्लव समुहले लिन सक्छ ?
by हाम्रो रिपोर्ट
मलाई याद छ २०५४ साल फागुन २१ गते हामी केहि दौंतरीहरु काठमाण्डौबाट आफ्नो जन्मथलो सिन्धुपाल्चोक निस्केका थियौं । उदेश्य सरल थियो जिल्लाको प्रसिद्ध तिर्थस्थल पाल्चोकीमाइको दर्शन गरेर न्यास्रो मेट्न गाँउ जाने । त्यतिबेला हिजोआज जस्तो सञ्चारको सुबिधा थिएन । गाँउमा एकाध घरहरुमा रेडियोहरु थिए । बेलुका घर पुग्दा पो थाहा भयो नेकपा (एमाले) बिभाजित भएछ र नेकपा (माले) गठन भएछ । म भर्खर बिस एक्काइसको ठिटो त्यति परिपक्व नभएपनि २०४८ साल देखिनै तत्कालिन नेकपा (एमाले) र त्यसका भातृ संगठनको गाँउ, जिल्ला, काठमाण्डौ र सम्पर्क मञ्चका सानातिना कमिटिका खुद्रा मसिना पदहरुमा आसिन थिएँ । त्यसैले होला त्यो बेला पार्टी बिभाजन प्रतिको चासो र चिन्ता केहि म मा पनि थियो नै । हामी भर्खरका युवा मस्तिष्कमा पार्टी बिभाजनको खबरले अलिक आबेग, उत्तेजना र नैराष्यता बढाउनु स्वभाबिकै थियो । पार्टी फुटकै सन्दर्भमा छलफल गर्नका लागी होला त्यसदिन गाँउमा पार्टीको बैठक रहेछ । बैठकको पुर्वसन्ध्यामा हामी केहि सहभागी साथीहरु केहि ठुलै स्वरमा आवेग, उत्तेजना र नैराष्यताकै कुरा गरिरहेका थियौं । अकस्मात त्यहाँको माहोल नरमाइलो बन्यो कारण गाँउका पुराना कम्युनिष्ट नेता जगन्नाथ आचार्य । उहाँ लामो समय भूमिगत र अर्धभूमिगत शैलीका बैठक र भेटघाटमा अभ्यस्त मान्छे । बैठक बस्दा पनि बैठक घरको चारैतिर कार्यकर्तालाई पहरा दिन लगाउनुहुन्थ्यो । हामी भने खुल्लमखुल्ला बाहिर फलैंचामा बसेर मनमोहन, साहना, बामदेब, सिपि, आरके, माधब नेपाल लगायतका नेताहरुको प्रशंशा र आलोचना गर्न ब्यस्त थियौं । त्यसैले होला उहाँले हामीलाई नराम्रोसंग हकार्नुभयो । हामी सबै चुपचाप बैठक घर भित्र गयौं । त्यसदिन पनि उहाँले एकदुई जना दाजुहरुलाई लौरो बोकेर बाहिर सेन्ट्री राखेको मलाई अझै याद छ । अनि बेलाबेलामा उहाँ आफै पनि बाहिर राउण्ड मार्नुहुन्थ्यो । बिपक्षीले पार्टीका आन्तरीक कृयाकलाप र कुराहरु थाहा नपाउन भनेर होला शायद । त्योदिन हामीहरुमा पनि पार्टीका नेतृत्वप्रति केहि आक्रोश थियो वा जगन्नाथ दाइमा पनि कुनै उत्तेजना । बैठक कक्षमा बसेपछि पनि उहाँसंग अलिकति खस्रोमसिनो भयो र हामी केहि साथीहरु त्यहाँबाट बाहिरियौं । बैठकले केहि निर्णय गर्न सक्यो वा सकेन मैले आजसम्म त्यो बिषयमा सोधखोज समेत गरिन । यहाँ यो प्रसंग उठाउनुको तात्पर्य चाँहि के थियो भने तत्कालिन एमाले बिभाजित भएको त्यो दिनले आजको नेपाली राजनीति सम्ममा कस्तो प्रभाव राख्यो भन्ने बिषय जोड्नकालागी मात्रै हो ।
साथीहरुका बिच कुन धार समाउने भन्ने सामान्य बहस र अन्तरक्रिया पनि भए । एकथरी साथीहरु राष्ट्रघाती महाकाली सन्धीका कट्टर बिरोधी, खुंखार राष्ट्रबादीधार बनेर पार्टी बिभाजन गर्ने मालेगुटमा लाग्ने कुरा गर्थे भने कतिपय मुलधारमै रहनुपर्छ भन्ने मत राख्थे । हाम्रो सर्कलमा मुलधारमै रहनुपर्छ भन्ने मत बलियो बन्यो र त्यतै रह्रयौं । २०५४ सालमै त मेरो दिमागले नेकपा (एमाले) बिभाजनलाई पार्टी बिभाजनको सामान्य प्रक्रिया मात्रै बुझेको थियो । २०५८ मा पार्टी एकिकरण भएपछि लाग्यो अब पुरानो पार्टी जस्ताको तस्तै हुन्छ । तर मेरो कलिलो मस्तिष्कले सोचेको जस्तो अवस्था थिएन । देशमा माओबादी जनयुद्ध राम्रै रफ्तारमा अघि बढिरहेको थियो । आज मलाई लाग्छ माओबादी जनयुद्ध तीब्र गतिमा बिकास हुनुको एउटा कारण तत्कालिन एमालेको बिभाजन पनि थियो । किनकी त्यो समय सिपि, बामदेब लगायतले अहिले केपी ओलीले भन्दा पनि उग्र राष्ट्रबादी नारा उरालेका थिए । अधिकांश तातो रगत भएका उग्र राष्ट्रबादी युवा कार्यकर्ताहरु मालेतिर लागेका थिए । तर कार्यकर्ताको भावना बिपरित नेतृत्वमा रहेकाहरु पुर्व पञ्चहरुको नेतृत्वमा सरकार बनाउन तिर ब्यस्त रहे । राष्ट्रबादको नारा ढोंग जस्तो मात्रै भयो । अनि बिस्तारै कार्यकर्ता पंक्तिमा निराशा छायो । २०५६ सालको संसदिय चुनावमा मालेको शर्मनाक हार पछि कार्यकर्ताहरु तितरबितर भए । तत्कालिन मालेका अधिकांश कार्यकताहरु माओबादी आन्दोलनतिर होमिए । २०५८ सालमा पार्टी पुन एकिकरण भयो । एकातिर खसि बोका सरह साँसदहरुको खुल्ला किनबेच जस्ता संसदिय खेलका कुरुप दृश्टान्त नेपाली राजनीतिमा देखिइरहेका थिए भने अर्को तर्फ एकाध अस्वभाबिक र अमानविय घटना बाहेक तल्लो तहका जनतामा माओबादी जनयुद्धका सकारात्मक संकेतहरु देखिनुले पनि आफुलाई सक्कली क्रान्तिकारी सम्झने युवाहरु बिस्तारै माओबादी जनयुद्धमा समाहित भइरहेका थिए । सारमा भन्न खोजिएको के हो भने माओबादि जनयुद्ध त्यति द्रुततर गतिमा बिकास हुनुमा तत्कालिन एमालेको बिभाजनले पनि राम्रै मलजल गरेकाने छ भन्ने नै हो ।
तत्कालिन एमालेको बिभाजन भएको ठिक २३ बर्ष पछि आज त्यहि एमाले र माओबादी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कानुनीरुपमा बाँकी भएपनि ब्यबहारिकरुपमा बिभाजन भइसकेको छ । मेरो सोझो दृष्टिले हेर्दा त्यतिबेला महाकाली सन्धीले एमाले फुटाएको थियो भने आज नेकपा फुटाउने बिज शायद एमसिसि नै हो । हरेकदिनका बहश र बादबिबाद हेर्दा २०५४ सालमा नेकपा (माले) ले जुन उग्र राष्ट्रबादको नारा उरालेको थियो त्यस्तै नारा ओली समुहका नेता र कार्यकर्ताले उरालेको देखिन्छ । तत्कालिन मालेमा जस्तै तल्लो तह सम्मनै नयाँ र आक्रामक पंक्ति ओली समुहमा देखिएको छ । जसले स्विकारे पनि नस्विकारे पनि सबै निर्वाचन क्षेत्रमा आफुले नजिते पनि अर्को समुहलाई हराउने र तेश्रो पक्षलाई जिताउन सक्ने हैसियत दुवै समुहसंग देखिन्छ । के अब यसको संकेत आगामी निर्वाचनमा दुबै पक्षले शर्मनाक पराजय भोगेपछि पहिला माओबादी जनयुद्धलाई एमाले फुट्दा मलजल पुगेजस्तै बिप्लब समुहले नेकपा फुटको फाइदा उठाउन सक्ला त ?
आत्मीय साथीलाई मेलम्ची दुख्दा !
प्रधानमन्त्रीज्यू, सपनाबाट ब्यूँझनुस अब !
अदालतलाई धम्की दिएको छैन - प्रचण्ड
माधव पक्षले बाेलाएकाे केन्द्रीय कमिटी बैठक अनधिकृत - ओली पक्ष
सिन्धुपाल्चोकको समुदायमा फैलीयो कोराना भाइरस
जलविरेमा ८ जना स्थानीयलाई टोकेको कुकुर मरेपछि रेविजको डर
सुकुटेका सोनामलाई जनसेवा श्री पदक
चिनले ठुलो मात्रामा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्दै
आदिवासी दिवसमा मिनज्याङ विमोचित
बालुवा तस्करीमा दोषीलाई उम्काउदै जिसस प्रमुख
गर्भवती र सुत्केरीलाई पोषक तत्वको अभाव
बलेफी – जलविरे – तेम्बाथान सडकखण्डकाे अवलोकन
सप्राेस नेपालद्वारा स्वास्थ सामाग्री हस्तान्तरण
मेलम्ची पिडितलाई जापानमा रहेका नेपालीको सहयोग
इन्द्रावतीकाे बजेट : युवा व्यवसायी र किसानलाई अनुदान
के मेलम्चीका मेयरलाई सन्चो नभएकै हो त ?
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक हाम्रो रिपोर्ट डट कम द्वारा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू हाम्रो रिपोर्ट डट कमका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।
सामाजिक अभियान प्रा.लिको लागि
सम्पादक/प्रकाशकः बुद्धिप्रसाद आचार्य
ठेगाना: इन्द्रावती गाँउपालिका– ५, सिन्धुपाल्चोक
विज्ञापनको लागिः ९८६४२७९५६६
© 2020 हाम्रो रिपोर्ट /सर्वाधिकार सुरक्षित powered by : sastosite.com